Nin loo qaatay in uu dhintey oo qabri loo sii wadey oo soo booday & dadkii sidey oo..Video – SBC
Nin loo qaatay in uu dhintey oo qabri loo sii wadey oo soo booday & dadkii sidey oo..Video
Dhacdo yaab & amakaag dhalisey ayaa Axadii aynu soo dhaafnay ka dhacdey wadanka South Afrika magaalo ka tirsan ka dagaal markii nin dhimasho loo heystay mudo 21 saac ah oo qabri loo qaaday uu soo booday intii aan la geyn halkii lagu aasi lahaa.
Warbixintan oo jaraa’idka wadanka Koofur Afrika & kuwa caalamka si weyn uga hadleen ayaa waxaa la sheegay in ninkan oo da’diisu aheyd 51 sano uu qabey xanuunka neefta kaasi oo marka uu qabto uu noqonayo sida qof dhintey oo kale, waxanaa qoyskiisa ay u qaateen maalinimadii sabtida galinkii dambe in odaygaasi oo sababo sharci magaciisa saxaafadu uga gaabsatey in uu dhintey taasi oo keentey in subixii Axada loo qaado halkii la doonayey in lagu aaso laakiin xaajadu waxay faraha ka baxdey, markii naxashkii ninkaasi lagu siday laga maqlay neeftuur & reen, dadkii ninkaasi naxashka ku dadaaminayey ayaa isku dayey inay dhulka dhigaan si ay u eegaan waxa ka dhex guuxaya naxasha ay ninka meyd ahaanta ugu sidaan, hase yeeshee odyagii 51 sano jirka ahaa ee meyd ahaanta loo sidey ayaa hal mar soo boodaay.
Dadkii ninkaasi la socdey & kuwii sidey naxashka ayaa kala orod & kala carar galey, iyagoo u qaatey odayga in uu yahay reer aakhiraad oo aanu u soo dhawaan, laakiin odaygii qaylada ayaa ka dhamaatay isagoo dadka ku leh “War maxaa la iiga cararayaa war kaalaya & hadalo kale”.
Dhacdadan oo ka dhacdey deegaanka Libode ee gobolka Eastren Cape ee wadanka South Afrika ayaa la sheegay in haatan wasaarada caafimaadka & ciidamada Booliiska ay baaritaan ku sameynayaan sida arintan u dhacdey, iyagoo sheegay in taasi tahay mid dhalin karta xaalado jahwareer.
Hadaba Linka Video hoose ka daawo ninkaasi oo naxashka lagu sido oo soo istaagaya & dadkii oo kala cararaya waa dhacdo yaab & naxdin badan.
Halkan ka eeg
Agoosto 2, 2011 at 3:21 pm
waxaan rabaa inaan kadiska ka qayb galo waxaana allah ka rajaynayaaa inuu igu guuleeyo … all sbc kheyr baan urajeenayaa